एक महिनाको बालक मुखमा च्यापेर २ तल्ला माथिबाट हाम्फाल्यो बिरालो, तर अचम्म..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एक महिनाको बालक मुखमा च्यापेर २ तल्ला माथिबाट हाम्फाल्यो बिरालो, तर अचम्म...
एक महिनाको बच्चा मुखमा च्यापेर एउटा बिरालोले ३० फिट उचाइबाट हाम्फाल्यो । तर बालकको भाग्य यतिसम्म बलियो थियो कि ती बालकलाई सामान्य चोट पनि लागेन । बिहीबार बिहान भारतको हरियाणाको भिवानीमा यस्तो अनौठो घटना भएको हो । यहाँ १ महिनाका बालक घरको दोस्रो तल्लामा सुतिरहेका थिए । उनी भएकै कोठामा अर्कोबेडमा उनका पिता सुतेका थिए । बिहान साढे ६ बजे बच्चासँगै सुतेकी आमा उठेर ट्वाइलेट गइन् ।
आमा फर्केर आउँदा बेडमा बच्चा थिएन । घरमा हंगामा भयो । बच्चाका मातापिता, हजुरबुवा हजुरआमा, काका र फुपुले खोज्न थाले । काकाले घरको दोस्रो तल्लाबाट हेर्दा देखे बाहिर अफ्नो घरभन्दा अगाडि २ घर छाडेर त्यसअघि रहेको खाली प्लटमा एक बिरालो बच्चासँगै बसिरहेको थियो । काका २६ वर्षका हेमन्तले तत्कालै ३० फुट उचाइबाट प्लटको छानो र त्यहाँबाट प्लटमा हाम्फाले । प्लटमा खस्ने बेला चिप्लिँदा उनको कम्मरमा पभयो । खुट्टामा पनि चोट लाग्यो र भतिजालाई बचाए ।
परिवारले बच्चालाई सम्हाल्दै हेमन्तलाई अस्पतालमा भर्ना गरे । अस्पतालमा हेमन्तको उपचार भइरहेको छ । डाक्टर बच्चा स्वस्थ रहेको देखेर चकित छन् । उनीहरुले बच्चाको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । यो बच्चा गर्भमा पनि पूरा समय नपुग्दै जनिमएको थियो । यस्तो बच्चा यति उचाइबाट खस्दा निकै खतरा हुने भए पनि यी बालकलाई केही नभएको देख्दा डाक्टर नै चकित परेका छन् ।